Phumla eCrimea nabantwana baka-2015, apho uya khona. Ukwahlula kweendawo ezifanelekileyo zokuhlala eCrimea kunye nabantwana babo bonke ubudala
ICrimea yenye yezona ndawo zilungele iholide zentsapho. Imozulu epholileyo, ulwandle olucacileyo, umoya wokuphulukisa, uhlobo oluyingqayizivele lwe peninsula luyimiba eqondileyo kulabo abacwangcisa iholide kunye nabantwana. Kwaye ukuba ucinga ukuba kukho izinto ezininzi zembali kunye neenkcubeko eCrimea kunye nezakhiwo ezikhenketho ezikhenketho, ke kwikhefu elilodwa kulula ukudibanisa luncedo kunye noluncedo: bobabini baphucula impilo kwaye banandipha ngokuzonwabisa kunye nosapho lonke.
Iholide yentsapho eCrimea kunye nezingane ukusuka kwi-0 ukuya kwi-3 iminyaka Iholide ehamba phambili eCrimea kunye nabantwana aba-3-5 Iindawo zokuya eCrimea kunye nomntwana ukusuka kwiminyaka emi-5 ukuya kwe-9 apho ukuphumla eCrimea nabantwana abavela ku-9 nangaphezulu
Ngokukodwa kwabo baceba ukuya eholide ukuya kwi-peninsula yaseCrimea kwihlobo le-2015, siye sazicwangcisa ukujonga ngokubanzi indawo ezifanelekileyo zokuzonwabisa kunye nabantwana babo bonke ubudala.
Iholide yentsapho eCrimea kunye nezingane ukusuka ku-0 ukuya kwiminyaka emithathu ubudala
Uninzi lwemibuzo kunye neenkxalabo ezinxulumene nokuphumla kwehlobo, zivela kubazali babantwana abangaphantsi kweminyaka emithathu ubudala. Kuyaqondakala - uhambo olunomntwana omncinci luneenkcukacha zalo. Okokuqala, i-crumb iza kuthatha ixesha lokunyanelana, okwangoku kule minyaka, ngokuqhelekileyo kuthatha iintsuku ezi-5 ukuya kwiiveki ezimbini. Ngoko ke, ukuze umntwana afunde kwaye azuze elwandle nelanga, kuyimfuneko ukuba uye kuphumla ubuncinane kwiiveki ezi-3. Okwesibini, xa ukhetha indawo yokuphumla nosana, induduzo kunye nesondlo kudlala indima enkulu: ukufumaneka kwemenyu yabantwana okanye ukupheka, isitya kunye neyendlu yangasese ekamelweni, ukusondela kweemarike kunye neziko lezonyango. Okwesithathu, kule minyaka, uninzi lwabahlengikazi abancinci alucebisi ukukhanya kwelanga ixesha elide. Ngako oko, ulwandle kufuneka libe yindawo ehamba phambili ekuhambeni: bahamba ngentsasa emoyeni olutsha, baya emanxwemeni, amaxesha ambalwa ahlanjululwayo kwaye abuyele, angabikho kwilanga elithe ngqo. Ngoko ke, indlu kufuneka ifunwe kakhulu kufuphi nolwandle ukuze ikwazi ukufika elwandle ize iphefumule umoya wolwandle.
Ukuqwalasela zonke izinto ezikhankanywe apha ngentla, iinqununu ezifanelekileyo kakhulu kwiintsapho ezinabantwana abancinci be-sanatoria kunye namacandelo abucala. Phakathi kweenzuzo zokuqala: indawo enemihlaba kunye namachibi abantwana kunye neendawo zokudlala, imenyu ekhethekileyo, amagumbi akhululekile, elwandle lolwandle. Kwinkampani yabucala, ukuqasha indlu okanye igumbi, unokunika umntwana ngeemeko ezisondelelene nekhaya ngokusemandleni: iikiti eqhelekileyo, inani elincinci labantu, akukho mihiyo enomsindo, umoya ocolileyo.
Ngokubhekiselele kwindawo yokuhlala, indawo efanelekileyo eCrimea yokuphumla kunye nezingane yintshona kunye nentshona yaseCrimea. I-Alushta, i-Alupka, i-Yalta kunye ne-Sudak yizona zixeko ezidumileyo kwiindawo zokuzikhusela zaseMzantsi. Kukho ii-sanatoriums ezininzi kunye nezindlu zokuhlala zezindlu zentsapho, ezinika zonke iimeko zokuphumla okunethezekile kunye nokuphuculayo. Ulwandle lucocekile, iilwandle zininzi kwaye zinesihlabathi, umoya uhle. Unonwabo olukhulu kubantwana nakubantu abadala: ukuzonwabisa kwamanzi, ukuhamba, amachibi okubhukuda kunye neendawo zokudlala. Ithuba elihle lokuphumla kunye nezingane kulommandla kukuphela kuka-Agasti-ekuqaleni kukaSeptemba. Okokuqala, ulwandle lushushu, ilanga alisayi kushisa, kwaye abanye bangaphantsi. Okwesibini, egcwele izithelo ezivuthiweyo nezivuthiweyo-izityalo ezivuno-izityalo, izithambile ezicebileyo. Kulabo abafuna ukuphumla kwindawo enokuthula, kuyafaneleka ukukhetha indawo ezisezantsi ezisemaphandleni, umzekelo, iGurzuf, Koreiz, Simeiz, Foros.
Ngokubhekiselele kunxweme lwentshona yeCrimeli, apha indawo yokuqala efanelekileyo phakathi kweendawo zokuhlala ze-spa yi-Evpatoria. Phakathi kweenzuzo: inani elikhulu lezindlu zokubhukuda, kubandakanya uhlobo lwentsapho, uhla lolwandle oluhlambulukileyo kunye neentaba ezincinci, ulwandle olufudumele, izakhiwo zokuzonwabisa eziphuhlisiweyo. Kodwa ekuphakameni kwexesha lehlobo lase-Evpatoria amabhishi ahlala egcwele. Ngoko ke, ngenxa yekhefu leentsapho eziqinileyo, enye indawo ehlala ecaleni kwentshona yeCrimea - iSaki - iya kuhambelana. Amasango e-Saki avuke, ininzi isanti, kodwa nge-shell-and-pebble impurities, ulwandle lufudumele kwaye lucocekile. Ukuba uhlala kwindawo ethile kufuphi namanzi, ngoko unako ukuphumla okukhulu kunye nosana, kunye nomntwana omdala.
ECrimea: ukuphumla nabantwana
Iholide enhle eCrimea kunye nabantwana abaneminyaka engama-3-5 ubudala
Ngendlela, malunga nabantwana abadala. Emva kweminyaka engama-3-4 ukuhamba kunye nabantwana kuba lula. Kwaye abazali banokukhetha indawo yokuphumla, ukugxila kuphela kwiimfuno zomntwana, kodwa nakwabo. Amabhebhe amacwecwe ayisisithintelo, ukuba kusengaphambili banakekele iqela elincinci lemifuno yomntwana. Kwakhona kunokwenzeka ukuba ukhethe ihotele okanye indlu yokubhola apho kubonelelwa khona abantwana beentengiso okanye abantwana abaza kubantwana, oya kuba nako ukunakekela umntwana ngelixa abazali behamba okanye baphumle kwi-cafe.
Ngokubhekiselele kwiindawo zokungcebeleka kweCrimea kubazali bezingane ukususela kwiminyaka emi-3 kuya kwe-5, ukhetho lwabo lukhulu kakhulu. Ngokomzekelo, ikhefu leentsapho elihle kakhulu linokusetyenziswa kwiFoodsia. Amanzi aphantsi, amatye amahle anesihlabathi esilungileyo, ngendlela, incedo kakhulu ekuhambeni kunye nokulungele ukwakha izindlu zentlabathi, ubuninzi bezindlu zokukhwela kunye nezokhenketho, ukuthabatha amawaka abavakatye ngonyaka. Uthobekile kodwa uhlambulukanga, "ummelwane" waseTheodosia yilali dolophu yaseBeregovoi, eya kuvuya kubazali bezoqoqosho kunye namabhankana akhululekile, izindlu ezingabizi kunye namaxabiso athengwa ngokutya nokuzonwabisa. Kwabo bacwangcisa iholide ekhutheleyo kunye nezingane, unokukucebisa ukuba uye eKoktebel eseduze, apho enye yeepaki ezona ndawo zihamba phambili eCrimea zikhoyo. Kukho i dolphinarium eKoktebel, ukutyelelwa kuyo kuya kubangela ulwandle luvuyise abantwana babo bonke ubudala. Ukulungele ukuzihlaziya eCrimea kunye nabantwana abavela kwiminyaka emi-3 ukuya kweyesihlanu kunye neendawo zokungcebeleka ezidlulileyo zeSouth Coast-Sudak, Alushta, Alupka.
Uya kuphi eCrimea nomntwana oneminyaka emi-5 ukuya kweyesi-9 ubudala
Abazali bezingane ezindala, ngaphandle kweeholide elwandle olukhululekile kunye neepaki zamanzi kunye nokuzonwabisa kwiindawo zokungcebeleka kwiindawo ze-spa, zingaqala ukuzisa abantwana babo ekuvuyiseni ukuphumla esifubeni semvelo. Ngethamsanqa, ubuhlobo beCrimea kunye nobuninzi beelwandle "zasendle" ngandlela-thile kuncedisa ekuphuhliseni uthando lomntwana kunye nentlonipho yendalo. Ewe, oku akukona malunga nemimandla ekhethwe ngabantu abanomdla kunye nabantu abangaqhelekanga kwaye kungekhona ngeendawo ezinobungozi, kodwa malunga neyona nto intle yeCrimea, apho ukuphumla nentente kuya kuhlala kukukhumbula okungenakulibaleka. Ngokomzekelo, unokonwabela ubuhle beCrimea, iindawo ezimhlophe zekhephu kunye nolwandle oluhlaza okwesibhakabhaka eKapa Tarkhankut. Le ngenye yezona ndawo zibalaseleyo zeholide "zasendle" ngasentshonalanga. Nangona ukuphakama kwexesha leeholide apha kukhululekileyo ngokuthelekiswa noNxweme lwaseMzantsi, kunye nemozulu ekhethekileyo kunye nobuhle obuhle buza kubangela lula ukungena kwiindawo zokungcebeleka ezininzi. Ngokuqhelekileyo uTarkhankut ukhethwa ngabantu abakhetha ikhefu leentente elwandle. Kodwa ukuba ucinga ukuba abantwana bakho basakulungele ukuba "ukuzikhusela", ngoko unako ukuya kwiidolophana zokuhlala - eChernomorskoye, Olenevka, Okunevka. Ngaphandle koko, unako ukuhlala nabantwana kwiihotele zendawo ezingabizi okanye kwicandelo labucala, kunye nobuhle kunye noqhagamshelwano kunye nemvelo emangalisayo ukuba uphume kwi-promontory ngokwayo.
Kuphi ukuhlala eCrimea nabantwana abavela ku-9 nangaphezulu
Kulo nyaka, ikhefu zasehlobo kunye nezingane azinakuba nje kuphela-lolwandle-ukuzonwabisa, kodwa nolwazi olusebenzayo. Ngaphezu koko, kukho izinto ezininzi zeenkcubeko nezembali eCrimea. Njengekhetho, ikhefu leentsapho elihle kakhulu linokubanjelwa eSevastopol. Kwi-hero-city kunye neendawo ezikuyo kukho indawo ezininzi eziya kushiya izinto ezingenakulibaleka kubazali kunye nabantwana. Unokuchaphazela imbali, umzekelo, ukutyelela amatshabalalo edolophu yaseGrisi yaseChersonese okanye enkulu kwiYurophu Chersonesus Lighthouse. Inomdla kwaye iluncedo iya kuhamba kwiimyuziyamu zendawo kunye neendawo ezingakhohlwayo. Kukhona ipaki enkulu yamanzi eSevastopol, ukuhamba ngeenqanawa kunye ne dolphinarium. Unokuchitha uhambo olulungileyo kunye nabantwana ngokutyelela: indawo yokuhlala yangaphambili ye-Khan - Bakhchisaray; Indlu yeLivadia, iTalee yeFairy kunye neNest Swallow eYalta; ipaki ye-safari e-Belogorsk; i-museum yetshokolethi eSimferopol.
Ukongezelela, ungalibali ukuba iCrimea - ayilona nje ulwandle olucocekileyo kunye nohambo, kodwa neentaba ezintle kakhulu. Ngoko ke, ngaphezu kweholide yaseklasini kunye nabantwana, ungazama ukufunda nokusebenza, umzekelo, uya kujonga lentaba. Enye yezona zithandwa kakhulu zikhuphukela phezulu kwintaba yase-Ayu-Dag, eyaziwa kangcono ngathi njenge-Bear Mountain. Kwinqanaba lika-Ayu-Dag kukho ihotele kunye nezindlu zokubholisa abo bakhetha ukuphumla ngokukhululekile. Kuzo zonke ezinye iikholeji ezilungiselelwe iintente kunye nezinye izixhobo zokusebenza. Ukongezelela, kukho iindawo ezininzi zemihla ngemihla, ezibandakanya iinxalenye ezahlukeneyo zeCrimea njengeentaba kunye neenduli, kunye nokuhlamba ulwandle kunye nokutyelela iinqaba ezihle kakhulu.
Njengoko ubona, ukuhlala eCrimea kunye nabantwana kunokungafani ngokupheleleyo. Kodwa yiyiphi inketho ongeyi kukhetha, iya kuhlala igcwele ukukhumbula okungazilibaleki malunga neepensile zaseCrimea ezahlukileyo.
Isibikezelo sezulu se-Anapa ngo-Apreli 2017 kwi-Hydrometeorological Centre
Ukhuseleko lwabantwana xa uqubha ngamanzi avulekileyo
Uhambo oluya kwisixeko sasendulo saseMalin
Ukumiselwa komsebenzi wemoto yamathumbu
Indlela yokuphumelela uthando lwabalingane
Ukuxolela intlungu kumntu othandekayo
Uhambo oluya eparadesi elahlekileyo: ngokucacileyo amahle aseSychelles
Umdlali waseMelika nomculi uBrittany Murphy
Isaladi eluhlaza kunye nesalmon eshushu
Ubomi bomntu kaOlga Buzovoy
Izixhobo zokwenza izimonyo
Abantwana aba-7 bezopolitiko abadumileyo abahlala kwamanye amazwe
Ungayinqoba njani abamelwane?
I-yoghurt eyenziwe, i-yogurt, i-cottage cheese